Aadan Barre Ducaale Oo Ka Hadlay Wararka Sheegaya In Xilka Laga Qaadayo Wasiirka Amniga Kenya – somalilandtoday.com
Aadan Barre Ducaale Oo Ka Hadlay Wararka Sheegaya In Xilka Laga Qaadayo Wasiirka Amniga Kenya
(SLT-Nairobi)-Madaxa golaha Aqlabiyada Baarlamaanka Kenya ahna xildhibaanka magaalada Garissa Mr Aden Bare Ducaale ayaa sheegay in xilka aan laga qaadi doonin wasiirka Amniga Kenya.
Mr Ducaale oo warbaahinta kula hadlay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Nairobi Khamiista maanta, ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in xildhibaano ka tirsan xisbiga Jubulle ay qorsheynayaan xil ka xayuubinta Fred Matiangi.
Wasiirka amniga ayaa maalmihii la soo dhaafay warbaahinta gudaha Kenya ay hadal heysay in uu ka mid yahay mas’uuliyiin Imaaraadka uu ku eedeynayo in ay qeyb ka ahaayeen lacago dahab been abuur ah looga qaatay ganacsato u dhashay Carabta.
Xildhibaanka Garissa ayaa meesha ka saaray arintaan waxaana uu sheegay in aysan jirin mooshin ka dhan ah Matiangi hadii uu soo baxana uu noqon doono shaqsiga ugu horeeya ee difaaci Doona.
Maalintii isniinta ee todobaadkaan ayey aheyd markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo wasiirka amniga Fred Matiangi lagu eedeyay in imaaraadka ay u iibgeeyeen dahab aan sax Aheyn.
Aden Bare Ducaale ayaa ah afhayeenka xisbiga haya talada Kenya ee Jubulle gaar ahaan garabka madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto.